Volamena any Miandrivazo : nampahafantatra ny lalàna ny Anor sy BCMM | NewsMada
Volamena any Miandrivazo : nampahafantatra ny lalàna ny Anor sy BCMM
Par Taratra sur 13/06/2016
Betsaka ny miasa ivelan’ny ara-dalàna eo amin’ny fitrandrahana volamena any amin’ny faritra Miandrivazo. Tonga tany an-toerana ny ao amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika, niaraka tamin’ny Anor sy BCMM nandresy lahatra azy ireo.
Ezahin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika sy ireo sampana miaraka aminy ny manatona akaiky ny vahoaka, amin’ny alalan’ireo birao misahana ny fitsinjaram-pahefana, hisorohana ny tsy fanarahan-dalàna amin’ny fitrandrahana. Ny herinandro lasa teo, nitsidika ny distrikan’i Miandrivazo ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny minisitera niaraka amin’ny Agence nationale de l’or (Anor) sy ny Bureau du cadastre minier de Madagascar (BCMM), nitondra fanazavana sy nampahalala ireo lalàna tsara ho fantatr’ireo mpitrandraka volamena any amin’iny faritra iny. Fampahafantarana azy ireo ny lalàna momba ny tontolo iainana sy ny fitrandrahana.
Ezaka ataon’ny minisitera mpiahy, Anor ary ny BCMM, ny mandray feo avy any am-potony, hahafantarana ny zava-misy rehetra any an-toerana. Ireny no hoentina manampy amin’ny famolavolàna ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany, izay efa mandeha amin’izao fotoana izao. Maro loatra mantsy ny gaboraraka tsy maintsy hiadiana amin’ity fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ity, mba samy hahazoan’ny rehetra tombony, manomboka any am-potony, ho an’ny kaominina tompon’ny haba 30 %, hatrany amin’ny fanjakana foibe. Tanjona ny fampanarahan-dalàna.
Ho matihanina mandoa hetra
Nitondra fanazavana ny lalàna ho an’ny mpitrandraka sy ny mpanangom-bokatra ny Anor. Etsy andaniny, ny BCMM, nampahalala izay tokony harahina manomboka amin’ny fahazoan-dalana momba ny fikarohana, fahazoana ny tany, hatrany amin’ny fitrandrahana. Lalàna mifehy ny fitrandrahana raha fintinina. Malaza hatramin’izay iny faritra iny noho ny fahamaroan’ny volamena ao aminy, ka izay no ezahina amin’ny fampanarahan-dalàna ireo mpitrandraka azy any am-potony hatrany amin’ny toekarem-pirenena. Tsy horaisina ho vadin’asa mandritra ny maitsoahitra fotsiny izany, fa ho mpiasa matihanina mandoa hetra.